Sawirro: Madaxweynaha oo boqolaal ruux salaada jimcaha la dukaday kana Hadlay Dagaal Beeleedyada ka socda Dalka. | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Sawirro: Madaxweynaha oo boqolaal ruux salaada jimcaha la dukaday kana Hadlay...
Sawirro: Madaxweynaha oo boqolaal ruux salaada jimcaha la dukaday kana Hadlay Dagaal Beeleedyada ka socda Dalka.
Madaxwaynaha Soomaliya Maxamed cabdullahi farmaajo oo maanta salaada qudbada kula dugtay boqolaale dadwayne masaaajidka isbahaysiga islaamka ayaa waxa uu sheegay in dhibtaada dalkeena ka jira iyo goobaha ay al shabaab ay ka haystaan gobalada dalkeena Soomaalia qaybo kamid ahi aysan waxba ka qaban Karin ciidamda shisheeye ee dalka u joogo nabad ilaalin balse ay xorayn karaan kaliya ayuu yiri dalka ciidamada xooga Soomaliyeed haday helaan taageerida shacabka Soomaliyeed.
Madaxwayne Farmaajo ayaa tibaaxay shacabka Soomaliyeed iyo dawladooda haday is garabsadaaan ay wax badan ka qaban karaan dhibaatada daashatay dalka islamarkaana hormar waara ay kusoo dabaali karaaan.
Maxamed cabdullahi farmaajo madaxwaynaha Soomaliya ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaliyeed ee ku dagaalamaya qeebo kamid ah gobalada dalkeena Soomaliya inay ku joojiyaan colaada si shuruud la,aan ah maadaama dad Soomaliyeed ay geeriyoonayaan.
Hadalkaan madaxwaynaha Soomaliya maxmaed cabdullahi farmaajo ayaa yimid kagadaal markii ay ka soo cusboodaaneed qaybo kamaid ah gobalada hiiraan mudug labada shabeelle colaad beeleed sbababatay dhimashada dad fara badan oo kuwaasi oo aanan waxba galabsan.